Vakuru veHurumende Vari Kugadzirisa Here Zvakapa Kuti Vatemerwe Zvirango?
Mutungamiri weAmerica VaDonald Trump
Hurumende nhasi iri kutarisira kuti ichatungamira vanhu vanenge vachiratidzira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende zvibviswe.
Zvirango izvi zvakatemerwa vakuru ava nenyika dzeAmerica, Britain, Canada, Australia nesangano reEuropean Union.
Asi vamwe munyika vari kuti chiri kukanganisa Zimbabwe handi zvirango izvi asi nyaya yekutonga nedemo. Ko chii chaizvo chinoda kuitwa kuti zvirango izvi zvibviswe?
Kunyangwe hazvo vamwe vari kufora vachiti zvirango zvinofanira kubviswa, vamwe vanoti nyaya yekutyora kodzero dzevanhu nevamwe muhurumende ndiyo yaunza nhamo mumusha vachiti zvirango izvi zvinotofanira kusimbaradzwa.
Vamwe vanoti zvirango zvinotofanira kusimbaradzwa ndiVaKelvin Mawire vanova .
Vanhu ava vari kupomera hurumende mhosva yekusaita zvayakanzi iite kuti zvirango zvibviswe zvakafanana nekuremekedza kodzero dzevanhu.
Muna Nyamavhuvhu gore rapera semuenzaniso, America yakatemera zvirango vaitungamira mauto ePresidential Guard VaAnselem Sanyatwe akapomerwa mhosva yekupfura vanhu vairatidzira muna Nyamavhuvhu gore rapera.
Kunyangwe hazvo mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vakaumba komisheni yaitungamirwa naVaKgalema Motlanthe kuti iongorore nyaya iyi, kusvika parizvino hapana chati chaitwa.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko VaNick Mangwana vanoti hurumende iri kuita asi haidi zvekuenderwa pamberi.
Asi mumwe anorwira kodzero dzevanhu uye akapa humbowo kukomisheni yaVaMotlanthe VaMakomborero Haruzivishe vanoti vanhu vane hama dzakapfuurwa vakanzi vacharipwa hapana chavawana kusvika parizvino.
Asi sachigaro weBroad Alliance Against Sanctions, rimwe sangano ravaka musasa munaKurume panze pemuzinda weAmerica muHarare richiti zvirango zvibviswe, VaCalvern Chitsunge vati zvirango izvi zvinofanira kubviswa.
VaChitsunge vanoti panorwa nzou huswa ndihwo hunonzwa nekutsokodzerwa nekudaro varombo ndivo vari kutoomerwa nezvinhu.
Vatiwo vanoona sekuti Zimbabwe iri kurangwa nenyika dzekumavirira nekuda kwekuti yakatora ivhu mugore ra2000. Vati hurumende yaVaMnangagwa iri kugadzirisa zvekutyorwa kwekodzero dzevanhu zvaitaurwa.
Pfungwa dzaVaChitsunge idzi dzinotsigirwawo naAmai Linda Masarira Kaingidza vanotungamira bato rinopikisa reLEAD.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Doctor Pedzisayi Ruhanya vanoti kunyangwe hazvo zvirango zvichifanira kubviswa, Zimbabwe infanira kuremekedza kodzero dzevanhu.
VaRuhanya vanotiwo vanoona sekuti kuiswa kwezvirango izvi kwakabatsira kudzora hutungamiriri muhurumende nebato reZANU PF mukutyora kodzero dzeveruzhinji.
Nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzeSADC, dzinoti dzichabatana neZimbabwe mukuratidzira mangwana dzichikurudzirawo kuti zvirango zvibviswe.
Parizvino mazita makumi masere nemana ndiwo ari pagwaro rezvirango reAmerica. Vari pazvirango zveEU vashoma zvikuru vasara vanosanganisira muchakabvu Robert Mugabe nemudzimai wavo Amai Grace Mugabe uye vamwe vari kumboongororwa vanosanganisira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika VaConstantino Guvheya Chiwenga uye mukuru wemauto General Philip Valerio Sibanda.